४० लाख डोज खोप ल्याउने चीनसँग सहमति : तत्काल १० ल्याउने, अब लगाउने पालो कसको ? Canada Nepal
४० लाख डोज खोप ल्याउने चीनसँग सहमति : तत्काल १० ल्याउने, अब लगाउने पालो कसको ?
क्यानाडा नेपाल आषाढ ३ २०७८
काठमाडौं । सरकारले चीनबाट तत्काल १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने भएको छ ।
चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट उत्पादित ’भेरोसेल’ खोप आगामी दुई हप्ताभित्रमा १० लाख डोज खोप ल्याउने तयारी भएको हो ।
१८ लाख डोज खोप अनुदानमा दिइसकेको चीनले ४० लाख डोज खोप खरिदका लागि नेपाललाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।
जसअनुसार चालु जुन महिनाभित्र १० लाख डोज खोप ल्याइने नेपाल सरकारको तयारी रहेको हो । ’जी टु जी’ प्रक्रियाबाट खोप खरिद गरेर ल्याउन लागिएको हो ।
अब आउने खोप बाँकी रहेका उमेर समूहलाई लगाउने तयारी भए पनि औपचारिक रुपमा निर्णय हुन भने बाँकी रहेको छ ।
आषाढ ३, २०७८ बिहिवार ११:३३:३९ बजे : प्रकाशित
नेपालमा थप ३३८३ जनाको कोरोना संक्रमण, २४ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ३८३ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार बेलुका दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको कूल १६ हजार ७१८ परीक्षण गर्दा ३ हजार ३८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
१० हजार ६३८ पीसीआर परीक्षण गर्दा २ हजार ४४८ जनामा र ६ हजार ८० एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ९३५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ९९४ जना संक्रमणमुक्त हुँदा सोही अवधिमा २४ जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
श्रावण १९, २०७८ मंगलवार १७:५७:५५ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन ९ सय ४ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँका कति ?
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा थप ९ सय ४ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप कोरोना संक्रमित हुनेमा काठमाडौंका ६ सय १३ जना, ललितपुरका १ सय ७७ जना र भक्तपुरका १ सय १४ जना रहेका छन् ।
यस्तै मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ३८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ७ लाख २ हजार ९७ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ६३ हजार ७ सय १८ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ९९४ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ६ लाख ६० हजार १ सय १६ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निको हुने दर ९४ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप २४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ हजार ९ सय २२ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रावण १९, २०७८ मंगलवार १८:१५:२१ बजे : प्रकाशित
के हो केभ सिन्ड्रम ?
काठमाडौं - विश्वभर कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलदै जाँदा डा. रवीन्द्र पाण्डेले यसबारे विभिन्न जानकारी दिइरहेका छन् । यस्तै बुधबार डा. पाण्डेले केभ सिन्ड्रमबारे जानकारी दिएका छन् ।
कोरोना महामारीको त्रास, होम आइसोलेसन तथा लकडाउनको कारण विश्वभर नै करोडौं मान्छेलाई घरभित्र बस्ने तथा घरबाहिर जान डराउने अवस्था उत्पन्न भएको थियो / छ । त्यति मात्र हैन, कोरोनाको खोप लगाइसकेका मान्छेहरु पनि घरबाहिर जान, काममा फर्किन, बजार तथा भेटघाटमा जान डराएर घरभित्रै बसेका छन् । यसलाई केभ सिन्ड्रम नामाकरण गरिएको छ ।
घरबाहिर गएमा अन्य व्यक्तिसंग भेट हुनसक्छ, संक्रमण सर्न सक्छ, संक्रमण सरेमा अस्पतालमा बस्नुपर्छ तथा बाहिर बातावरण असुरक्षित छ भनेर आफ्नो पढाइ, जागिर, ब्यबसाय तथा सामाजिक जीवनमा नफर्किएका मान्छेहरुको ठूलो संख्या बिध्यमान छ ।
ती व्यक्तिहरु कसैलाई भेट्न, सुरक्षित तरिकाले कतै जान तथा समाजमा घुलमिल हुन सकेका छैनन् । कोरोना भाइरसका नयाँ नयाँ प्रजाति आइरहेको हुँदा आफुले लगाएको खोपको विश्वास नलाग्ने, खोप लगाएका कति व्यक्ति संक्रमित भए ?
कति व्यक्ति अस्पताल भर्ना भए, कति व्यक्तिहरुको मृत्यु भयो जस्ता कुरा इन्टरनेटमा सर्च गर्ने, आफन्त तथा साथीसंग फोनमा कुरा गर्दा बाहिर निस्किन खतरा भएको कुरामात्र गर्ने तथा घर नछोड्ने जस्ता बानीको बिकास भएको छ । यसले गर्दा उनीहरु आर्थिक रुपमा असुरक्षा महशुष गर्ने तथा चिन्ता, डर, तनाब, अनिद्रा, मुड स्विंग आदिको सिकार भइरहेका छन् ।
यो समस्या निवारणको लागि ध्यान, योग तथा व्यायाम गर्ने, सुरक्षित ठाउँमा जाने, भीड नहुने ठाउँमा मर्निंग वा इभिनिंग वाक गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर आफ्नो पढाइ, काम तथा सामाजिक जीवनमा क्रमशः घुलमिल हुने, मनोपरामर्श लिने लगायतका अभ्यास गर्नु जरुरी छ ।
महामारी बढिरहेका ठाउँमा तथा पुरा मात्रा खोप नलगाएका व्यक्ति भने आफ्नो अवस्था अनुसार सिर्जनशील काम गरेर घरमा बस्न सकिन्छ । यो प्राकृतिक अवस्था नै हो । यो सिन्ड्रम अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलियादेखि अन्य सबै देशमा बढिरहेको छ । जसले गर्दा आर्थिक असन्तुलन समेत उत्पन्न भएको छ । डा. रवीन्द्र पाण्डे
श्रावण २०, २०७८ बुधवार ११:१२:५१ बजे : प्रकाशित
# केभ सिन्ड्रम
साउन २२ गतेदेखि कोरोनाविरुद्धको भेरोसेल खोप दोस्रो मात्रा लगाइँदै
काठमाडौँ - साउन २२ गते कोरोनाभाइरसविरुद्धको पहिलो मात्रा भेरोसेल खोप लगाएका व्यक्तिहरूले दोस्रो मात्रा लगाउन पाउने भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै साउन २२ गतेबाट पहिलो मात्रामा भेरोसेल खोप लगाएका व्यक्तिहरूले दोस्रो डोज लगाउने बारे जानकारी गराएको हो ।
पहिलो डोज खोप लगाएको २१ दिन पछि दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने भएकाले गत असार २९ गतेदेखि सञ्चालन भएको खोप अभियानमा सहभागी भएका ५५ वर्षमाथिका उमेर समूहले दोस्रो मात्रामा खोप लगाउन पाउने मन्त्रालयले सूचनामा जनाएको छ ।
श्रावण २०, २०७८ बुधवार १३:०२:०२ बजे : प्रकाशित
एकैदिनमा ४१०७ जनामा कोरोना संक्रमण, ३५ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार १०७ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार अपरान्ह दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको कूल १६ हजार २९८ परीक्षणमा ४ हजार १०७ जनामा कोेरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
११ हजार ३५४ को पीसीआर परीक्षण गर्दा २ हजार ९७५ जना र ४ हजार ९४४ को एन्टीजेन परीगक्षण गर्दा १ हजार १३२ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको मन्त्रालयले दिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ९०८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यसपछि क्रमशः झापामा २९६, कास्कीमा २२६, ललितपुरमा २०६, भक्तपुरमा १६५ र मोरङमा १३२, मकवानपुरमा १०२, सुनसरीमा ९९, चिनवमा ९२, रुपन्देहीमा ६१, नवलपारसी पूर्वमा ५८, तनहुँमा ५५, नुवाकोटमा ५३ र गोरखामा ४९ जना कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ५३५ जना कोरोना संक्रमणमुक्त हुँदा सोही अवधिमा ३५ जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
श्रावण २०, २०७८ बुधवार १७:५०:३६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देश कोरोनाको तेस्रो लहरतर्फ अगाडि बढ्न थालेको बताएको छ । बुधबार प्रेस ब्रिफिङमार्फत मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा।समीर अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले पछिल्लो समय अस्पतालमा ज्वरो आएर, टाउको दुखेर आउने बिरामी बढेको र भर्ना हुने क्रम पनि बढेको बताए । उनले कोरोनाको दैनिक रुपमा संक्रमण पुष्टि हुने संख्या बढ्दै गएको बताए ।
उनले भने - 'अहिले कोरोनाको दैनिक रुपमा संक्रमण पुष्टि हुने संख्या बढ्दै गएको, अस्पतालमा भर्ना हुनेहरुको संख्या पनि तुलनात्मक रुपमा बढी देखिएको छ'
उनले थपे - 'यो हिसाबले मुलुक तेस्रो लहर तिर अगाडि बढ्न थालेको हो की भन्ने संकेत हामीले देखिरहेका छौं र विस्तारै त्यो अवस्था देखिदै गएको पनि छ ।'
श्रावण २०, २०७८ बुधवार १८:३४:०५ बजे : प्रकाशित